बिदेशमा हुनेहरुको खुसिको खबर ! यस्तो छ अाजको बिदेशी बिनिमय दर |
बिदेशमा हुनेहरुको खुसिको खबर ! यस्तो छ अाजको बिदेशी बिनिमय दर
२०७५, २८ श्रावण सोमबार १२:३१ August 13, 2018 ताजा खबरविविध
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले आज तोकेको विनिमय दर अनुसार एक साउदी रियालको खरिददर २९ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रिदर २९ रुपैयाँ ४४ पैसा रहेको छ ।
त्यस्तै, कतारी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ३२ पैसा छ । युएई दिर्हाम एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ०६ पैसा तोकेको छ ।
मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २६ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रिदर २७ रुपैयाँ ०३ पैसा रहेको छ । कोरियन वन १ सयको खरिददर ९ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रिदर ९ रुपैयाँ ७७ पैसा रहेको छ । कुवेती दिनार एकको खरिददर ३ सय ६१ रुपैयाँ ९३ पैसा छ भने बिक्रिदर ३ सय ६३ रुपैयाँ ९१ पैसा रहेको छ ।
बहराइन दिनार एकको खरिददर २ सय ९१ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रिदर २ सय ९२ रुपैयाँ ८७ पैसा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको दरमा वाणिज्य बैंकहरुले भने केही रकम तलमाथि गरेर मूल्य तोक्न सक्नेछन् ।
गुल्मीमा १६ करोड फ्रिज, ३० करोड राजश्व संकलन
गुल्मीमा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा चालु र पुँजिगत दुवैतर्फको खर्च प्रतिशत अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको छ । पुँजीगततर्फ झण्डै ३ अर्ब कुल बजेटमध्ये ९३.६२ प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा निरीक्षणको कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ ।
कार्यालय प्रमुख शशिन्द्र खातीका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलानमा गत आर्थिक वर्षको यो खर्च प्रतिशत निकै राम्रो हो । गत आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ कुल २ अर्ब ८८ करोड ८८ लाख १२ हजार २० रुपैयाँ निकासा भएकोमा ९३.८७ प्रतिशत खर्च भएको थियो । स्थानीय तहमा जाने पुँजीगत ५ अर्ब ७० करोड ५४ लाख १५ हजार ४ सय ९९ रुपैयाँ मध्ये ५ अर्ब ४६ करोड ९५ लाख ६ हजार खर्च भएको छ ।
यस्तै खर्च हुन नसकी १५ करोड ८० लाख ९० हजार ५ सय १६ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । जस मध्ये जिल्लाको ठुलो तम्घास सिमलटारी प्युठान सडक आयोजनमा ५ करोड २३ लाख ७० हजार २ सय ९ रुपैयाँ फ्रिज गएको छ । स्थानीय तहमध्ये रेसुङ्गा नगरपालिका, सत्यवती गाउँपालिका , रुरु गाउँपालिका , गुल्मीदरवार गाउँपालिका, चन्द्रकोट गाउँपालिका र मालिका गाउँपालिकाले बजेट फ्रिज हुनबाट रोकेका छन् ।
मुसिकोट नगरपालिकामा ६ लाख ५५ हजार ६ सय रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । छत्रकोट गाउँपालिकामा १४ लाख ९५ हजार ८ सय १ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । कालिगण्डकी गाउँपालिकामा ८ लाख ५४ हजार फ्रिज भएको छ ।
ईस्मा गाउँपालिकामा १ लाख ३९ हजार २ सय ५ रुपैयाँ फ्रिज गएको छ । धुर्कोट गाउँपालिकामा १ लाख ८२ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ फ्रिज गएको छ । मदाने गाउँपालिकामा ८ लाख ४१ हजार ४ सय ३७ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको ४ लाख ८८ हजार ४ सय ४८ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट १ करोड ३६ लाख ८६ हजार ४ सय ८४ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको पनि १० लाख ५७ हजार ८९ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।
भुकम्प आवास पुनरनिर्माण आयोजनाले काम गर्न नसकेर ३० लाख रुपैयाँ फ्रिज गराएको छ ।
भुकम्प आपतकालिन ८ लाख ४१ ह्जार ३ सय ७१ रुपैँयाँ तथा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयको ६ लाख ८५ हजार ३ सय ३ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । कफि अनुसन्धान कार्यक्रमको १ लाख १६ हजार ८ सय ७९ रुपैयाँ फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै गत आर्थिक बर्षमा गुल्मीमा २९ करोड ८३ लाख ९३ हजार ५ सय ७३ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।
विम्बल्डन टेनिसकाे उपाधि नोभाक जोकोविचले जिते
२०७६, ३० असार सोमबार १०:०५